လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုခင်းကနေ သင့်သားသမီးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပုံ
ဖတ်လို ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကွီဘက် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ခရိုအေးရှား ချက် ဂရိ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျာမန် စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား ဆွီဒင် တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာလာယာလမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာရဗီ အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို
ကလေးများအား လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုသည့်အကြောင်းကို တနုံ့နုံ့တွေးလိုသူ မရှိသလောက်ပင်။ ယင်းအကြောင်း တွေးတောရုံနှင့်ပင် မိဘများ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြရသည်။ ယနေ့လောကတွင် ယင်းသို့သောမတော်မတရားပြုမှုသည် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ၊ မနှစ်မြို့စရာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကာ ကလေးများအပေါ် ကြီးမားသောဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်နိုင်ပေသည်။ အဆိုပါကိစ္စကို သုံးသပ်ထိုက်ပါသလော။ သင့်ကလေး ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အဘယ်အရာကို သင် တလိုတလားပေးဆပ်လိုသနည်း။ မတော်မတရားပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော မနှစ်မြို့စရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များအကြောင်း သိရှိရန် အနည်းငယ်ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့သိရှိထားခြင်းက အမှန်ပင် ထူးခြားစေနိုင်ပါသည်။
များပြားလှသည့်မတော်မတရားပြုမှုကို သင် ရင်ဆိုင်ရန် သူရဲဘောမကြောင်ပါနှင့်။ သင်၌ အရည်အချင်းမရှိဟု ခံစားရလျှင်ပင် သင့်ကလေးတွင်မရှိသည့် စွမ်းရည်များ သင့်တွင်ရှိပါသည်။ သင့်ကလေးကမူ ယင်းစွမ်းရည်များရရှိရန် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမည်ဖြစ်၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ သင့်တွင် အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် ဉာဏ်ပညာရှိလာပေမည်။ သင့်အတွက် အရေးကြီးသောအရာမှာ အဆိုပါစွမ်းရည်များ တိုးများလာရန်နှင့် သင့်ကလေးကို ကာကွယ်ရာတွင် ယင်းတို့ကိုအသုံးချရန်ဖြစ်၏။ မိဘတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အခြေခံကျသောအဆင့်သုံးဆင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ယင်းတို့မှာ ဤသို့ ဖြစ်၏– (၁) သင့်ကလေး မတော်မတရားပြုခြင်းမခံရအောင် အဓိကကာကွယ်ပေးသူဖြစ်ပါ၊ (၂) သင့်ကလေးကို လိင်နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေးပါ၊ နှင့် (၃) အခြေခံကာကွယ်နည်းတချို့ကို ကလေးအား သင်ပေးပါ။
သားသမီးများ မတော်မတရားပြုခြင်းမခံရအောင် ကာကွယ်ပေးရန်မှာ မိဘများ၏ အဓိကတာဝန်ဖြစ်၏။ သားသမီးများ၏တာဝန်မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် ကလေး မတော်မတရားပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သားသမီးများကို မသင်ပေးမီ မိဘများဘက်မှ အရင်ဆုံးသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် မိဘတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ကလေးမတော်မတရားပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိထားရမည့်အရာတချို့ ရှိပါသည်။ မည်သို့သောလူစားမျိုးက ကလေးများကို မတော်မတရားပြုကြောင်း၊ ယင်းသို့ ပြုရန် သူတို့ မည်သို့ ကြိုးပမ်းကြကြောင်း သင် သိထားဖို့လို၏။ ကလေးများအား ဗလက္ကာရပြုသူတို့သည် ကလေးများကိုပြန်ပေးဆွဲ၍ မုဒိမ်းကျင့်ရန် နည်းလမ်းများရရှိဖို့ မှောင်ရိပ်ခိုချောင်းမြောင်းနေသော သူစိမ်းများဖြစ်သည်ဟု မိဘများ ယူမှတ်လေ့ရှိကြသည်။ ယင်းသို့သောလူယုတ်မာများ အမှန်ပင် ရှိကြပါသည်။ သတင်းမီဒီယာများကြောင့် ယင်းသို့သော လူယုတ်မာများကို ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏပင် သတိပြုမိတတ်ကြသည်။ သို့သော် သူစိမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်ဟူသော သတင်းမျိုးမှာ ရှားပါးလှ၏။ ကလေးမတော်မတရားပြုမှု၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည် ကလေးဘက်မှ ရင်းနှီးသိကျွမ်းထားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးဖြစ်နေသည်။
ဖော်ရွေသော အိမ်နီးချင်း၊ ဆရာ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ နည်းပြ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးတစ်ဦးသည် သင်၏သားသမီးများကို မတော်မလျော်တပ်မက်နိုင်သည်ဟု သင် မယူမှတ်လိုခြင်းမှာ သဘာဝပင်။ အမှန်မှာ လူအများစုသည် ထိုသို့မဟုတ်ကြချေ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှလူတိုင်းကို သံသယဝင်စရာမလိုပါ။ သို့သော် ကလေးမတော်မတရားပြုကျင့်သူ အသုံးပြုသည့် နည်းပရိယာယ်များကို သိရှိထားခြင်းဖြင့် သင့်သားသမီးများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ယင်းနည်းပရိယာယ်များကို သိရှိထားခြင်းက အဓိကကာကွယ်ပေးသူတစ်ဦးဖြစ်ရန် မိဘဖြစ်သူသင့်အား အသင့်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ၊ လူကြီးများထက် ကလေးများကို ပို၍စိတ်ဝင်စားပုံရသူတစ်ဦးသည် သင့်ကလေးကို အထူးစိတ်ဝင်စားပြီး လက်ဆောင်များဝယ်ပေးခြင်း၊ ကလေးထိန်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကလေးနှင့်အတူ အပြင်ထွက်လည်ရန် ကမ်းလှမ်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လာလျှင် သင် အဘယ်သို့ ပြုမည်နည်း။ ထိုသူသည် ကလေးဗလက္ကာရပြုသူဖြစ်ရမည်ဟု ကောက်ချက်ချသင့်သလော။ မချသင့်ပေ။ ထိုသို့ အလျင်စလို ကောက်ချက်မချလိုက်ပါနှင့်။ ယင်းသို့သောအပြုအမူသည် သဘောရိုးနှင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် ယင်းကို သတိထား၍ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆို၏– “ဉာဏ်တိမ်သောသူသည် သူတစ်ပါးပြောသမျှကို ယုံတတ်၏။ ပညာသတိရှိသောသူမူကား မိမိသွားရာလမ်းကို စေ့စေ့ကြည့်ရှုတတ်၏။”—⁠သု. ၁၄:၁၅။
ယုံရခက်သော မည်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးမဆို သဘောရိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်ကို သတိရပါ။ သင့်ကလေးအား စေတနာဖြင့်ထိန်းပေးနေသူ မည်သူ့ကိုမဆို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါ။ သင်သည် သင့်ကလေးကို အချိန်မရွေး လာကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုသူအား အသိပေးပါ။ သားသုံးယောက်၏ ငယ်ရွယ်သောမိဘများဖြစ်သူ မယ်လီဆာနှင့် ဘရက်ဒ်တို့သည် ကလေးတစ်ဦးတည်းကို လူကြီးတစ်ဦးနှင့်ထားခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားကြသည်။ သားတစ်ယောက်အား ဂီတပညာကို အိမ်၌သင်ကြားစေသောအခါ နည်းပြအား မယ်လီဆာက “ဆရာရှိနေတုန်း အခန်းထဲကို ကျွန်မ ဝင်ထွက်နေမယ်နော်” ဟူ၍ပြောပြထား၏။ ဤသို့သတိဝီရိယရှိခြင်းက တစ်ဖက်စွန်းရောက်ပုံပေါက်သော်လည်း အဆိုပါမိဘများသည် အခါနှောင်းမှ ဝမ်းနည်းရမည့်အစား ယခုပင် ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားလိုပေမည်။
သင့်ကလေး၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ကျောင်းစာများကို စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြပါ။ ခရီးတိုထွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သင့်ကလေး၏ အစီအစဉ်အားလုံးကို အသေးစိတ်သိရှိထားပါ။ လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုသည့် ပြစ်မှုများအကြောင်း ၃၃ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့သည့် စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ်ဦးက မိဘများဘက်မှ သတိဝီရိယရှိမည်ဆိုလျှင် ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသော ပြစ်မှုများစွာကို မိမိတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြ၏။ “မိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို ကျွန်တော့်ဆီ အပ်ထားကြတာကိုး။ . . . ဒီတော့ ကျွန်တော် ပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့ လွယ်လွယ်လေးပဲ” ဟူသော ဗလက္ကာရပြုသူတစ်ဦး၏စကားကို သူကိုးကားဖော်ပြ၏။ ဗလက္ကာရပြုသူအများစုသည် အမြတ်ထုတ်ရလွယ်ကူမည့် ကလေးများကို ရွေးချယ်ကြကြောင်း သတိရပါ။ သားသမီးများ၏ဘဝတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ပတ်သက်ကြသော မိဘများသည် မိမိတို့သားသမီးများအား အနိုင်ကျင့်ခံရမှုမှ လွတ်မြောက်စေကြသည်။
ကောင်းစွာနားထောင်ပေးခြင်းသည် သင့်ကလေးအား အဓိကကာကွယ်ပေးသူအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရမည့် နောက်တစ်နည်းဖြစ်၏။ ကလေးများသည် မတရားပြုကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်း ဖွင့်ပြောခဲ၏။ ကလေးများသည် အရှက်အကြောက်ကြီးကာ အခြားသူများ မည်သို့တုံ့ ပြန်မည်ကို စိုးရိမ်တတ်ကြ၏။ သို့ ဖြစ်၍ စကားအရိပ်အမြွက်ပြောလှာလျှင်ပင် ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပါ။ * သင့်အား စိတ်ထင့်စေမည့်အရာတစ်ခုခုကို ကလေးကပြောလှာလျှင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် မေးခွန်းများမေး၍ စကားနှိုက်ထုတ်ပါ။ * ကလေးထိန်းတစ်ဦးကို ပြန်မလာစေလိုကြောင်းပြောဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း မေးပါ။ လူကြီးတစ်ဦးက သူနှင့်အတူ ကစားနည်းအသစ်အဆန်းများကို ကစားကြောင်း ပြောဆိုလျှင် “ဘယ်လိုကစားနည်းမျိုးလဲ။ သူ ဘာတွေလုပ်သလဲ” ဟုမေးပါ။ မိမိအား တစ်စုံတစ်ယောက်က ကလိထိုးကြောင်း တိုင်တန်းလာလျှင် “ဘယ်နေရာကိုလဲ” ဟုမေးပါ။ ကလေး၏အဖြေများကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားပါနှင့်။ မတရားပြုကျင့်သူများသည် ကလေးအား ဘယ်သူမှ မင်းကို ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဟူ၍ ပြောပြတတ်ကြသည်။ ယင်းအတိုင်းဖြစ်နေခြင်းက ဝမ်းနည်းစရာပင်။ ကလေးတစ်ဦး မတရားပြုကျင့်ခံရလျှင် မိဘဖြစ်သူအနေနှင့် အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံကာ ထောက်မပေးခြင်းက စိတ်ပိုင်းအရ နာလန်ထူလာစေသည့် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်၏။
သင့်ကလေးကို လိင်နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေးပါ
ကလေးမတော်မတရားပြုခြင်းအကြောင်း စာအုပ်တစ်အုပ်တွင် “လိင်အကြောင်း ဘာမှမသိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်ဖို့ လွယ်လွယ်လေးပဲ” ဟူသော ကလေးဗလက္ကာရပြုမှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတစ်ဦး၏အဆိုကို ကိုးကားဖော်ပြထား၏။ အဆိုပါကျောချမ်းစရာစကားများသည် မိဘများအတွက် အသုံးဝင်သော သတိပေးချက်တစ်ရပ်ပင်။ လိင်အကြောင်း မသိနားမလည်သော ကလေးများသည် ကလေးဗလက္ကာရပြုသူများအတွက် လှည့်ဖြားရ ပိုလွယ်ကူသည်။ အသိပညာနှင့် ဉာဏ်ပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ကောက်သောစကားကို ပြောတတ်သောသူ” ၏လက်မှ ကယ်တင်နိုင်ကြောင်း ကျမ်းစာကဆို၏။ (သု. ၂:၁၀-၁၂) သင့်ကလေးအား ထိုသို့သော အသိပညာနှင့် ဉာဏ်ပညာရှိစေလိုသည်မှာ သေချာပါသည်။ ထို့နောက် သင်သည် သူ့ကို ကာကွယ်ပေးရာတွင် အခြေခံကျသော ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ဤအရေးကြီးသောအချက်ကို သူ့အား သွန်သင်ပေးရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
သို့သော် ယင်းကို သင် မည်သို့ အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေမည်နည်း။ မိဘများစွာအတွက် သားသမီးများနှင့်အတူ လိင်အကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းသည် အတော်ပင် ကသိကအောက်နိုင်လှ၏။ သင့်ကလေးအတွက် ပို၍ပင် ကသိကအောက်နိုင်ပေမည်။ ထို့အပြင် ယင်းအကြောင်းကို သူ့ဘက်မှအစပြု၍ သင်နှင့်ပြောဆိုလိုမည်မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် သင့်ဘက်မှ အစပြုပါလေ။ မယ်လီဆာက ဤသို့ဆို၏– “ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ကျွန်မတို့ စောစောပဲစလိုက်ကြတယ်။ သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမှ မထူးဆန်းဘူး၊ ရှက်စရာလည်း မလိုဘူးဆိုတာကို ကလေးစကားမသုံး ဘဲ စကားလုံးအမှန်ကိုသုံးပြီး ဖော်ပြပေးတယ်။” ယင်းသို့ပြောပြပြီးနောက် မတော်မတရားပြုသည့်အကြောင်းကို ဆက်ပြောဆိုဖို့ ပိုလွယ်ကူပေလိမ့်မည်။ မိဘများစွာသည် သားသမီးများအား အမြဲဖုံးထားရသော ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများသည် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီး သီးသန့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြထားကြသည်။
ရှေ့ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဟက်သာက ဤသို့ဆို၏– “စကော့တ်နဲ့ ကျွန်မဟာ သားလေးကို သူ့ရဲ့လိင်အင်္ဂါဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်၊ သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်၊ ကစားစရာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပြထားကြတယ်။ မေမေ့အတွက်မဟုတ်သလို ဖေဖေ့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဆရာဝန်အတွက်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပြထားတယ်။ သားလေးကို ဆရာဝန်ဆီခေါ်သွားတဲ့အခါ သားလေး နေကောင်းအောင် ဆရာဝန်က ကုပေးမှာဖြစ်လို့ ဆရာဝန်တော့ ကိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီး ရှင်းပြတယ်။” မိဘနှစ်ပါးသည် အခါအားလျော်စွာ ထိုသို့အနည်းအကျဉ်းပြောပြထားပြီး တစ်ဦးဦးက မတော်လျော်သည့်နည်းဖြင့် သူ့အား ကိုင်တွယ်လာလျှင် သို့မဟုတ် အနေရခက်စေလျှင် မိမိတို့ထံ အမြဲလာရောက်ပြောပြနိုင်ကြောင်း ကလေးအား သေသေချာချာ ပြောပြထားကြသည်။ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် မတရားပြုမှုမှကာကွယ်ရေးတွင် ကျွမ်းကျင်သူများက မိဘများကို မိမိတို့၏သားသမီးများနှင့် အလားတူပြောဆိုကြရန် အကြံပြုသည်။
ဤအကြောင်းအရာကို သားသမီးများအား သွန်သင်ပေးရာတွင် ကြီးမြတ်သောဆရာထံမှ သင်ယူပါ * စာအုပ်သည် အမှန်ပင် အထောက်အကူရကြောင်း များစွာသောသူတို့ တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီ။ အခန်း ၃၂ မှ “ယေရှု ကာကွယ်ခံရပုံအကြောင်း” သည် မတော်မတရားပြုမှု၏အန္တရာယ်များနှင့် မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်း၏ အရေးကြီးမှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ကလေးများအတွက် တဲ့တိုးဖြစ်သော်လည်း အထောက်အကူပြုသောအကြောင်းအရာဖြစ်၏။ “ကျွန်မတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြောပြထားရမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထောက်အကူပြုတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းတစ်နည်းကို ဒီစာအုပ်က ဖော်ပြပေးတယ်” ဟု မယ်လီဆာကဆို၏။
မျက်မှောက်လောကတွင် ကလေးများကို တို့ထိကိုင်တွယ်လိုသူတချို့ သို့မဟုတ် မတော်လျော်သောနည်းများဖြင့် မိမိတို့အား ကိုင်တွယ်စေလိုသူလူကြီးတချို့ရှိကြောင်း ကလေးများသိထားရန်လိုသည်။ အဆိုပါသတိပေးချက်များကြောင့် ကလေးများသည် ကြောက်ရွံ့ရန်မလိုသကဲ့သို့ လူကြီးအားလုံးကို မယုံသင်္ကာဖြစ်ရန်လည်းမလိုချေ။ “ဒါက အကာအကွယ်ဖြစ်စေတဲ့ သတိပေးချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ ဒီသတိပေးချက်က မတော်မတရားပြုမှုနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ သတိပေးချက်အများကြီးထဲက တစ်ခုပဲ။ အဲဒါက ကျွန်မသားကို ကြောက်စိတ်မဖြစ်စေခဲ့ဘူး” ဟု ဟက်သာကဆို၏။
နာခံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မျှမျှတတရှုမြင်ရန်လည်း သင့်ကလေးအား သင်ပေးသင့်၏။ ကလေးတစ်ဦးအား နာခံတတ်ရန်သင်ပေးခြင်းသည် အရေးကြီးပြီး ခက်ခဲသော သင်ခန်းစာတစ်ရပ်ဖြစ်၏။ (ကောလောသဲ ၃:၂၀) သို့သော် ယင်းသို့သောသင်ခန်းစာများသည် အစွန်းရောက်သွားနိုင်သည်။ ကလေးတစ်ဦးအား အခြေအနေတိုင်းတွင် လူကြီးတိုင်း၏စကားကို အမြဲနာခံရမည်ဟု သင်ပေးမည်ဆိုလျှင် ကလေးအနေနှင့် အလွယ်တကူ မတော်မတရားပြုခံရနိုင်၏။ ကလေးများသည် အဘယ်အချိန်တွင် အလျှော့ပေးလိုက်လျောလွန်းတတ်သည်ကို ဗလက္ကာရပြုသူများ လျင်မြန်စွာ သတိပြုမိကြ၏။ ပညာရှိသောမိဘများသည် နာခံခြင်းတွင် အကန့်အသတ်ရှိကြောင်း မိမိတို့၏သားသမီးများကို သင်ပေးကြ၏။ ခရစ်ယာန်များအတွက်မူ ယင်းသည် ထင်သလောက် မရှုပ်ထွေးပေ။ သူတို့လေးများကို ဤသို့ရိုးရိုးလေးပြောပြရုံသာဖြစ်၏– “ယေဟောဝါဘုရားသခင်က မှားတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကို တစ်ယောက်ယောက်က မင်းကိုလုပ်ခိုင်းရင် မလုပ်ရဘူးနော်။ ယေဟောဝါက မှားတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကို ဖေဖေနဲ့ မေမေတောင် မင်းကို မလုပ်ခိုင်းသင့်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်က မင်းကို အမှားတစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းရင် မေမေကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ဖေဖေကိုဖြစ်ဖြစ် အမြဲလာပြောပြရမယ်။”
အဆုံးတွင်မူ မိဘများမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်က တောင်းဆိုလာလျှင် လက်မခံသင့်ကြောင်း သင့်ကလေးအား သိရှိစေပါ။ မိဘမသိအောင် တစ်ခုခု ဖုံးကွယ်ထား ရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်က တောင်းဆိုလှာလျှင် မိဘအား အမြဲလာအသိပေးသင့်ကြောင်း သူ့ကို ပြောပြထားပါ။ ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေ၊ မတော်မတရားပြုသူ၏ မည်သည့်စကားပင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကလေးကိုယ်တိုင် အမှားတစ်ခုခုပြုမိသည်ဖြစ်စေ အမေ သို့မဟုတ် အဖေထံလာ၍ အမြဲပင် ပြောပြ၍ရသည်။ သို့သော် သူ့ကို သွန်သင်ပေးသည့်အခါ အထိတ်တလန့်မဖြစ်စေသင့်ပေ။ လူအများစုမှာမူ မကိုင်သင့်သည့်နေရာကို ကိုင်ကြမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏စကားကို နားမထောင်ဖို့၊ ဖုံးကွယ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းမည်မဟုတ်ကြောင်း သင့်ကလေးအား စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။ မီးလောင်လျှင် ပြေးရန်ထွက်ပေါက်တစ်ခု ကြိုတင်စီစဉ်ထားသကဲ့သို့ အဆိုပါပြောပြချက်များသည်လည်း “ကြိုတင်ကာကွယ်မှု” တစ်ရပ်မျှသာဖြစ်ရာ ယင်းသတိပေးချက်များကို အသုံးပြုဖို့ အမြဲလိုအပ်ချင်မှ လိုအပ်ပေမည်။
အခြေခံကာကွယ်နည်းတချို့ကို ကလေးအား သင်ပေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်မည့်တတိယအဆင့်မှာ တစ်ဦးဦးက သင်မရှိတုန်း အခွင့်အရေးယူရန်ကြိုးစားခဲ့သော် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်တချို့ကို ကလေးအား သင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကြံပြုထားသည့်နည်းတစ်နည်းမှာ ကစားနည်းပုံစံဖြင့် သင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘများက “တကယ်လို့ . . . ဆိုရင်၊ ဘာလုပ်မလဲ” ဟုမေးကာ ကလေးအား ဖြေခိုင်းပါ။ “တကယ်လို့ ဈေးထဲမှာ မေမေတို့ လူကွဲသွားတယ်ဆိုရင်၊ မေမေ့ကို သား ဘယ်လိုရှာမလဲ” ဟူ၍ သင်မေးနိုင်ပေသည်။ ကလေးသည် သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အဖြေကို အတိအကျပေးနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း “ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းအောင် သားလုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကို စဉ်းစားမိသလား” ဟူသောထပ်ဆင့်မေးခွန်းများ မေးခြင်းဖြင့် သူ့အား သင်ပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်က မတော်မလျော်သည့်နည်းဖြင့် မိမိကို တို့ထိကိုင်တွယ်ဖို့ ကြိုးစားလာလျှင် အန္တရာယ်အကင်းဆုံး တုံ့ ပြန်မှုမှာ အဘယ်အရာဖြစ်မည်နည်းဟူသော မေးခွန်းများကိုအသုံးပြု၍လည်း ကလေးအား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းများကြောင့် ကလေးစိတ်ရှုပ်ထွေးလာလျှင် အခြားကလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ကြိုးစား၍ ပြောပြနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ– “မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူခင်မင်တဲ့ ဆွေမျိုးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ရှိနေတယ်။ အဲဒီနောက် အဲဒီဆွေမျိုးက မကိုင်သင့်တဲ့နေရာကို ကိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ အန္တရာယ်မရှိအောင် အဲဒီမိန်းကလေး ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်သလဲ။”
အထက်ပါအခြေအနေမျိုးတွင် အဘယ်အရာပြုလုပ်ဖို့ သင့်ကလေးကို သင်ပေးသင့်သနည်း။ စာရေးဆရာတစ်ဦးက ဤသို့ဖော်ပြသည်– “ ‘မလုပ်နဲ့’ သို့မဟုတ် ‘လာမနှောင့်ယှက်နဲ့’ ဟူ၍ လေသံမာမာနှင့်ပြောဆိုခြင်းက ပရိယာယ်များသောပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို နောက်ဆုတ်သွားစေသည် သို့မဟုတ် တွေဝေသွားစေသည်။” အသံကျယ်ကျယ်နှင့် ငြင်းဆို၍ အမြန်ဆုံးထွက်ပြေးကာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို ပြောပြဖို့ သေချာစေရန် ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး သင့်ကလေးကို ခဏတစ်ဖြုတ် သရုပ်ဆောင်စေပါ။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ပေးမှုကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားပုံ ရသော ကလေးတစ်ဦးသည် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် သို့မဟုတ် လအနည်းငယ်အတွင်း အလွယ်တကူ မေ့လျော့သွားပေမည်။ သို့ဖြစ်၍ ထပ်ခါတလဲလဲ လေ့ကျင့်ပေးပါလေ။
အဖေ၊ ပထွေး၊ အခြားအမျိုးသားဆွေမျိုးများ အပါအဝင် ကလေးကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သူအားလုံး ဤဆွေးနွေးမှုများတွင် ပါဝင်သင့်၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အမှန်ဆိုလျှင် ယင်းသို့သောသင်ကြားပေးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အားလုံးသည် အဆိုပါမတော်လျော်သောလုပ်ရပ်များကို ဘယ်တော့မျှ ကျူးလွန်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကလေးအား စိတ်ချစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမှုများစွာသည် မိသားစုအတွင်း၌ ဖြစ်ပျက်နေခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာပင်။ မတော်မလျော်ပြုမူနေသည့်လောကတွင် မိမိ၏မိသားစုကို ဘေးကင်းလုံခြုံသောရိပ်မြုံ မည်သို့ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း နောက်ဆောင်းပါးတွင် ဆွေးနွေးပါမည်။
^ အပိုဒ်၊ 10 မတရားပြုခံရသည့် ကလေးများစွာသည် တစ်ခုခု မှားနေသည်ကို အသံတိတ်လက္ခဏာများဖြင့် ပြတတ်ကြသည်ဟု ပညာရှင်များက မှတ်ချက်ချသည်။ ဥပမာ၊ ကလေးတစ်ဦးသည် အိပ်ရာတွင်ဆီးသွားခြင်း၊ မိဘများကို တွယ်ကပ်လွန်းခြင်း၊ တစ်ဦးတည်းနေရသည်ကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်း အစရှိသည့် ငယ်မူငယ်ကျင့်များပြန်ပေါ်လာလျှင် ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုက သူ့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေကြောင်း အချက်ပြနေပေမည်။ အဆိုပါလက္ခဏာများကို ကလေးမတော်မတရားပြုခံရသည့် တိကျသော အထောက်အထားအဖြစ် မယူမှတ်သင့်ချေ။ သင့်ကလေးအား စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေသည့်အကြောင်းရင်းကို သိရှိရန် အေးအေးဆေးဆေးဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုစေမည်ဆိုလျှင် သင့်အနေနှင့် နှစ်သိမ့်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့် ကာကွယ်မှုပေးနိုင်မည်။
^ အပိုဒ်၊ 10 ဤတွင် ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန် မတရားပြုသူရော ပြုခံရသူကိုပါ အမျိုးသားများအဖြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်။ သို့သော် ဤမူများသည် အမျိုးသားနှင့်ရော အမျိုးသမီးနှင့်ပါ သက်ဆိုင်သည်။
^ အပိုဒ်၊ 15 ယေဟောဝါသက်သေများ ထုတ်ဝေသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ယူအဲန်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် ယူအဲန်အတွက် တစ်သီးပုဂ္ဂလပညာရှင်တစ်ဦးပြုစုခဲ့သော ကလေးများအား အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အစီရင်ခံစာကို ယူအဲန်အထွေထွေညီလာခံသို့ ပေးပို့ခဲ့၏။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရ မကြာသေးမီနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ရှိ မိန်းကလေး သန်း ၁၅၀ ခန့်နှင့် ယောက်ျားလေး ၇၃ သန်းခန့်တို့သည် “အတင်းအဓမ္မ လိင်မှုပြုခြင်းခံခဲ့ရသည် သို့မဟုတ် အခြားလိင်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ” ကို တွေ့ ကြုံခဲ့ရလေသည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများမှာ ထိတ်လန့်စရာဖြစ်သော်လည်း “အမှန်တကယ်တွင်မူ ကိန်းဂဏန်းအမှန်ထက် လျှော့၍ခန့်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်” ဟုအစီရင်ခံစာကဖော်ပြ၏။ နိုင်ငံတချို့တွင် အမျိုးသမီး ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသား ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းတို့သည် ကလေးဘဝ၌ လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကို ခံခဲ့ရကြောင်း နိုင်ငံပေါင်း ၂၁ နိုင်ငံမှ ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်မှုများက ဖော်ပြခဲ့၏။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအများစုမှာ ဆွေမျိုးများဖြစ်ကြသည်။